कहिल्यै घरमा नल्याउनुस् यी ३ तस्बिर – सजल सन्देश
घरको साज–सज्जामा धेरै जना सौखिन हुन्छन् । अझ घरका विभिन्न कोठामा विभिन्न तरिकाबाट सजाउनु मानिसको सौख नै हुन्छ । जसमा मानिसहरु ठूला–ठूला तस्बिर तथा चित्रकला ल्याएर राख्ने गर्छन् । तर सबै तस्बिर घर वा कोठामा सजाउन योग्य नहुन पनि सक्छन् ।
कुनैकुनै तस्बिरले मानिसमा सकारात्मक उ र्जा पैदा गराउँछ भने कुनै तस्बिरले जीवनका हरेका मोडमा न का रा त्मक प्रभाव पार्छ ।
वास्तु शास्त्रको अनुसार बजारमा भेटिने हरेक सुन्दर तस्बिरले घर सुन्दर बनाउन हुँदैन । जसमा यस्ता केही तस्बिर पर्छन् जसले घरमा अ शुभ गराउँछ ।
१. यदि कुनै तस्बिरमा पानी बगिरहेको, छागा (छहरा) लहराइरहेको हुन्छ भने त्यस्ता तस्बिर घरमा नल्याउनु नै उत्तम हुन्छ । किनकी वास्तुशास्त्र अनुसार जसरी पानी बगिरहेको हुन्छ घरमा रहेको पैसा पनि विना कारण खर्च भइरहने हुन्छ ।
२. डु बि रहेको वा ड ग मगाइरहेको डुङ्गाको तस्बिर घरमा राख्नुहुँदैन । किनकी हरेक दिन यस्तो तस्बिर हेर्दा मानिसमा गहि रो अस र पर्छ । जसले भाग्यमा बा धा पुग्ने बताइन्छ ।
३. बजारमा केहि यस्ता तस्बिर भेटिन्छन् जसमा महाभारत यु द्धको दृश्य कै द भएको हुन्छ । उक्त तस्बिर पनि घरमा राख्न नहुने वास्तु शास्त्रमा उल्लेख छ । यदि यस्ता तस्बिर राखेको खण्डमा व्यक्ति आ क्रा मक हुने र रि सालु हुन्छ ।